क्यान्सर सतर्कता दिवस: ‘समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर’ – Health Post Nepal
२०७८ असार ९ गते | Wednesday, 23 Jun, 2021
क्यान्सर सतर्कता दिवस: ‘समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर’
२०७७ असोज १० गते १४:२६
नेपालमा क्यान्सरको उपचारका लागि स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन र सेवामा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा बिरामीहरु उपचारका लागि विदेश जाने गर्दछन्। विदेशिने रकम रोक्न र सस्तोमा सहज उपचारका लागि सेवा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा निर्मल लामिछाने क्यान्सरका सबैजसो साधारण उपचार यहाँ गरिने भए पनि विशिष्टीकरण गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार उच्च तहको प्रिसिसन रेडियो थेरापी गर्न सकिएको छैन। रोबटिक सर्जरी र बोनम्यारो प्रत्यारोपणजस्ता सेवा नेपालमा सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
युरोलोजिष्ट (मूत्ररोग विशेषज्ञ)समेत रहेका उनी जनशक्ति उत्पादन सहज हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा बताउँछन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (नाम्स)बाहेक अन्यत्र क्यान्सरका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन भएको जनाउँदै उनले यस अस्पताललाई प्राज्ञिक थलो बनाउन सकिने बताए।
यहाँ रहेका २२ जनाभन्दा बढी विज्ञ चिकित्सकलाई तालिम दिएर प्राध्यापकका रुपमा काम लिन सकिने जनाइएको छ। समयमै क्यान्सरका जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नर्सिङदेखि डिएमसम्मका क्यान्सरका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा उपचारमा सहज हुने छ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम यस अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरेर दक्ष र विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रशस्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सके गाउँगाउँमा क्यान्सर पहिचान गर्न सहज हुन्छ।’
अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र न्यौपाने अस्पतालमा नर्सिङको पढाइ शुरु भएको बताउँदै थप शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएर नेपालकै नमूना प्रतिष्ठान बनाउन सकिने बताउँछन्। यहाँ रहेको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसँगै जनशक्तिले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न समस्या नरहेको जनाइएको छ।
नेपालका ५० प्रतिशत क्यान्सरका रोगीहरु उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन्।समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर विज्ञहरुले समयमा नै उपचार गर्न सके क्यान्सर रोग निको हुने बताएका छन्।
खानपान, आनीबानीमा परिवर्तन गरेर क्यान्सर रोग लाग्नबाट बच्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ। खानपानमा ध्यान दिने हो भने ४० प्रतिशत क्यान्सरको रोगी घटाउन सकिने उनीहरुको सुझाव छ। विश्वमा बर्सेनि एक करोड ४० लाख मानिसमा क्यान्सर देखिने गरेको तथ्याङ्क छ।
विश्वमा एक वर्षमा ७६ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु क्यान्सरकै कारण हुने जनाइएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी क्यान्सर हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। ८०.९ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।
नेपालमा फोक्सो, आन्द्रा, पेट, स्तन, पाठेघरको मुख र डिम्बाशयको क्यान्सरका बिरामी धेरै हुने गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा. गौतम कतिपय क्यान्सरका रोगहरु आफैं परीक्षण गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘आफैंले छामेर वा लक्षणहरु हेरेर क्यान्सर हो÷होइन पत्ता लगाउन सकिन्छ।’
शरीरमा गिर्खा, गाँठागुठी देखिनु, कोठी, मुसाको रङ बदलिनु वा आकार बढ्दै जानु, लामो समयसम्म खोकी निको नहुनु, खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिवर्तन वा धोद्रो हुनु क्यान्सरका लक्षण हुन्। यस्तै खकारमा रगत देखापर्नु वा लामो समयसम्म खोकी निको नहुनु, लामो समयसम्म दिसामा गोटा पर्नु, पातलो दिसा हुनु, दिसामा रगत देखिनु पनि क्यान्सरको लक्षण हुन् ।
महिनावारी नभएको बेलामा रगत देखिनु, महिनावारी रोकिएका महिलाको पुनः रक्तश्राव हुनु वा महिनावारीको समयपछि रक्तश्राव हुनु, स्तनमा गाँठागुठी देखिनु, स्तनको मुन्टोबाट रगत मिसिएको दूध आउनु वा मुन्टो दबिनु क्यान्सरका लक्षणहरु भएको जनाइएको छ।
यसैगरी छोटो समयमै शरीरको वजन घट्नु, रक्तअल्पता देखिनु, ज्वरो आइरहनु, नाक, मुख, शरीरका अन्य छिद्रहरुबाट रगत आउनु पनि क्यान्सरका लक्षण भएको निर्देश डा गौतमले जानकारी दिए। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल आउन पनि उनले सुझाव दिए।
अस्पतालका अध्यक्ष डा लामिछाने मानिसले व्यक्तिगत सरसफाइ र खानपानमा विशेष ध्यान दिन सकेमा क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिने बताए। उनका अनुसार चुरोट, बिडी, खैनी, सूर्ती, जाँड, रक्सी र लागुपदार्थ सेवन नगर्ने, बासी, सडेगलेको र ढुसी परेको खानाहरु नखाने, पोलेर डढेको मासु र अन्य खानेकुरा नखाने गर्दा पनि क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।
यसैगरी अखाद्य रङ प्रयोग गरिएका खानेकुराहरु नखान, चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुरा र धेरै नुन नखान, आफ्नो गुप्ताङ्ग सधैँ सफा राख्न, मौसमअनुसारको हरियो सागपात, तरकारी र फलफूल दिनहुँ खान उनले सुझाव दिए।
महिलाले आफ्नो गर्भाशय श्राव परीक्षण प्रत्येक वर्ष गर्ने हो भने पनि क्यान्सरबाट बच्न सकिने उहाँको सुझाव छ। यस्तै महिलाहरुले स्तनमा गिर्खा, गाँठागुठी पलाएको छ÷छैन प्रत्येक महिना आफैंले राम्ररी छामेर हेर्ने र फेला परेमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिने गर्नसके स्तन क्यान्सरबाट बच्न सकिने डा. लामिछाने बताउँछन्।
अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. आचार्य रोगका विषयमा जनचेतना जगाउन नसकिएको स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले क्यान्सरबारे सचेतना फैलाउनुप¥यो। जसले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’
मानिसले समयमै थाहा पाएमा उपचारबाट निको हुन सक्ने भएकाले आम नागरिकसम्म यस रोगका बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। छिटो उपचार गर्न सकेमा निको हुने र खर्च कम लाग्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणका कारण जुम प्रविधिमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिँदैछ। यस अस्पतालको स्थापना दिवसलाई नै सरकारले क्यान्सर सतर्कता दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ।
अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ८९४ नयाँ क्यान्सरका रोगीको उपचार गरिएको छ । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा एक लाख ४५ हजार ७७६ जनाको बहिरङ्ग सेवामा उपचार गरिएको छ।
जसमध्ये ३२ हजार ८३१ नयाँ हुन् । अस्पतालले तीन हजार ९३९ जनाको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ। अस्पतालले एक वर्षमा रक्तक्यान्सरका बिरामीलाई म्याक्स फाउण्डेशनबाट प्राप्त २० करोड १९ लाखको औषधि निःशुल्क वितरण गरेको छ। यसैगरी विपन्नलाई १६ करोड र क्यान्सर सेवामार्फत ५२ लाखको औषधि वितरण गरिएको छ।
७० वर्षमाथिकालाई निःशुल्क सेवावापत १६ लाख ९६ हजार ३३५ र १५ वर्ष मुनिकालाई एक करोड ६७ लाख ४१ हजार ४९७ बराबरको उपचार निःशुल्क गरिएको छ ।
Tags: क्यान्सरकाे उपचार
चीनद्वारा चार कम्पनीलाई कोभिड खोप बिक्री अनुमति
के फरक छ पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणका विधि?
बुधबार २ हजार ४२१ संक्रमित थपिए, ५२ को मृत्यु
अमेरिकी खोप सहयाेग नेपालले नपाउने
डा. चाँदनी वैद्यको स्तन क्यान्सरका कारण निधन
१९ दिनमा स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गरेका ४ काम
डा. सदिना श्रेष्ठको निधन
‘डेल्टा प्लस’ भेरियन्टमा प्रभावहीन हुनसक्छ खोप
अब निजी अस्पतालमा निशुल्क कोरोना उपचार नहुने
भारतमा तीन महिनायताकै न्यून संक्रमण
काठमाडौंमा पनि भेटिए ‘कालो ढुसी’का संक्रमित, यस्ता छन् बच्ने १० उपाय
भोलिदेखि कोभिसिल्ड खोप दिइदैं, क–कसले पाउने ?
बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका एमाले कार्यकर्ता रावतमाथि भेरीमा नर्स कुटपिटको आरोप
प्रधानमन्त्री निवासमा करकाप र‌ केरकारका ६ घन्टा: कसरी उम्के डा गिरी?
फागुन २३ देखि कोभिशिल्ड लगाएकालाई दोस्रो डोज एस्ट्राजेनेका लगाइने
काठमाडौंबाट गायब भएको १४ हजार खोपबारे विभागको अनुसन्धान– ‘पुष्टि भए कारबाही हुन्छ’
स्वास्थ्य सेवामा ६२२ कर्मचारीको स्तरवृद्धि , क–कसको भयो ? विवरणसहित
कोभिडपछि यस्ता समस्या देखिए ज्यानै जानसक्छ, विशेषज्ञको छ यस्ता सुझाव
टिचिङ अस्पतालले माग्यो कर्मचारी
सरकारले सेवा–सुविधामा विभेद गरेपछि नर्सहरूको प्रश्न–चिकित्सक एक्लैले सेवा दिने हो र?